Keenya haro maaya gubbaa ganda qoree.. - Welcome to bilisummaa
Keenya haro maaya gubbaa ganda qoree..
Galmee seenaa irraa: Walaloon kun jia’a 7. 2007 maxxanfame
Keenya haro maaya gubbaa ganda qoree
Jaalala tee hamtuu rabbumaat na rare.
Carcar keessa jiraa odaan seenaa qabuu
Lameen wal jaalate turus wal hin dhabu
Bishaan haro maayaa rabbumaa gogooysee
Silaa sirraa hin hafu hiree na hambise.
Afaan amaaraatiin qanqalloon sillichaa
Kan jaalatan malee kan jibban jinnicha.
Bishaan lubbuu tahu yoo dheebotte beeytaa
Nama si jaalatus yoo rakkatte beeytaa.
Baalli yoo goggoge ifiif lafa buâ€™aa
Hangam wal jaalatus eenyuu wajjiin duâ€™a.
Namni yoo rakkate rabbi isa yaadataa
Boochee nan boochisin lakkii na lakkiftaa.
Biyya faranjiidhaa xayyaaraan dhaqanii
Gantuu meeqan arkaa sin amanu ani.
Gurri hula hin qabu waa hunda dhagayaa
Miskiinummaa tiyya naan gaddin hiriyaa.
Afrikaa na dhiistee Ameerikaa galtee
Rabbittin si dhiise narra yoo jaalatte .
Qopheessaan; Najiib Zanuun
Previous Master plani amma Wayyaaneen baafte Finfinnee babaldhisuuf otoo hin ta’iin Oromiyaa daangaa daangaan adda qoqqoduu..
Next Facebook wants to show where your friends are